Indlu Yezivakashi Ethule Futhi Ethengekayo eMidtown Mobile! - I-Airbnb
Indlu Yezivakashi Ethule Futhi Ethengekayo eMidtown Mobile!
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Stephen
U-Stephen Ungumbungazi ovelele
Indawo iyamangalisa! Kuthuleke kanjalo! Inkundla yeLadd Peebles iwuhambo lwemizuzu emithathu kubantu abeza ukuzobuka umdlalo webhola lezinyawo wabafundi. Asikho isidingo sokukhokhela indawo yokupaka inkundla. Futhi indawo enhle yesikhulu esihambayo noma labo abahamba ngomkhumbi ngomkhumbi. Ikotishi lisendaweni ethule yangasese ene-microwave, ifriji, nekhofi namanzi. I-Uber eya edolobheni lasebusuku, i-Mobile bay, izindawo ezikhanga izivakashi, nazo zonke izinhlobo zokudlela ezingaphansi kwemizuzu emi-5.
Indawo yokugezela eyi-1 bdrm/1 yokugezela e-Tranquil etholakala esifundeni sase-Leinkauf Historic District. Sitholakala emgwaqeni onokuthula onezimoto ezincane ezisiza ekudaleni indawo enokuthula ezungezwe amakhaya omlando anokwakheka kwezwe okuhle, imiklamo ehlukahlukene yezakhiwo kanye nezinhlobonhlobo zezinyoni ongazibuka.
4.83 out of 5 stars from 186 reviews
4.83 · 186 okushiwo abanye
I-Leinkauf iyisifunda somlando esi-1 kwezingu-8 eziqashelwa iDolobha Lomakhalekhukhwini futhi yafakwa kuRejista Kazwelonke Yezindawo Zomlando ngo-1987. Kunezakhiwo ezingaphezu kuka-750 e-Leinkauf ezivela emakhaya, ezikoleni, ezindaweni zokudlela nokunye okwengeziwe. Abanye banomaka omlando weSibhengezo kanye ne-Shield omele ukuthi lawa makhaya agcine futhi agcina izakhiwo zawo zangempela ngaso sonke isikhathi.
I am a happily married man with 2 beautiful daughters and an amazing wife! I enjoy fishing, running, reading, and Airbnb!!!!
Sizotholakala ngemibuzo/iziphakamiso nanoma yini enye nge-Airbnb, kodwa maningi amathuba okuthi ngeke sihlangane mathupha ngeshwa! Mina nomkami sisebenza futhi sihlala ngaphesheya kwedolobha. Sizoqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuyajabulisa!
Sizotholakala ngemibuzo/iziphakamiso nanoma yini enye nge-Airbnb, kodwa maningi amathuba okuthi ngeke sihlangane mathupha ngeshwa! Mina nomkami sisebenza futhi sihlala ngaphesheya…
UStephen Ungumbungazi ovelele